I-Scorpio Uthando Iingcebiso - Ukuthandana ne-Scorpio
I-Scorpios inegama lokuba ngumqondiso obaluleke kunabo bonke we-Zodiac, nangona bayigcina loo mfihlelo baze balungele ukubetha. Baye banyanisekile, banomdla kwaye banakekela abo bathandayo.
U-Scorpio othandweni ngumzikhuseli, kwaye ukhetha ukukhupha izinto ngokukhawuleza. Unokufumanisa ukuba iSororo yakho yenza umcuphi wechungechunge phambi kwakho ngaphambi kokuba uvume ukuhamba ngosuku. I-Scorpio ingenza okungaphezu nje kwe "google" wena; bajwayele ukuba neengcambu zabo zokufihla ukucola okanye ukuxela imibutho.
Kodwa ke, banqwenela ukukrazula ulwahlulo olutsha. Batsalwe kwizinto eziqhenqileyo zokukhwabanisa, kwaye zivaliwe ngokuhambelana ngokuthe ngqo, ezinobunzima okanye ezinobungozi. Zizidalwa zesini, kodwa abaninzi banomoya wesithunzi ukuba bahambe kunye nokusebenza njengesiqulatho kuzo zonke iintlobo zezinto ezizimeleyo ezizayo.
Kwaye i-private word igama elihle kwi-Scorpio, njengoko bebuza zonke iindidi zemibuzo ehamba phambili, kwaye banikele ngokuncinci. Banoba nesipho sokugcina zabo iimpawu ezikhanyayo, ngelixa befaka ingqondo yakho nge-x-ray mbono.
Scorpio Guys kunye noGals
Umntu we- Scorpio ungumfowenu, kwaye ungomnye walabo bafana abakuphazamisayo ngengqondo yakhe, ukuba unomdla. Abanye batyelelwe abo baxhamla kwicala elifihlakeleyo, njengomthala wolwazi ovumela izinwele zakhe phantsi emva kweeyure.
Ibhinqa leScorpio liyabamba , kwaye amadoda afumanisa ukuba iimpawu ezizimeleyo ziququzelele. Kwinkcubeko yokuloba, akanakuncitshiswa ukunciphisa imilinganiselo yakhe, kwaye kunokwenzeka ukuba ibe nempumelelo, kodwa imicimbi yekhwalithi.
Xa uthandana no-Scorpio, ungakhohlwa ukuba akukho zimbini ezifanayo. I-Scorpion iya kugxininiswa ne-stinger ephakanyisiwe ukuba wenza njengokuba unayo inombolo. Ziyazonda ukucinga, kuba ziyazi ukuba ziyizinto eziqingqiweyo ezifihliweyo kwimfihlelo.
Ukuze uzuze i-Scorpio, yiba nguwe, kodwa hlakulela umoya wokufumanisa okungaqondakaliyo kwisigaba sokuzifumana.
I-Scorpio ngumtshintshi ozalwe kwaye uthanda ubudlelwane obuhlala bubonisa iintlobo ezintsha.
I-Scorpio ilawulwa ngu- Mars (wendabuko) kunye nePluto (namhlanje) kunye nothando ngamanye amaxesha imfazwe yokuthanda apha. Nge-Scorpio, uthando lugweba oluloba ngaphakathi kwaye luvelise into engcwatyelwe kuyo, ikhuphe izijikelezo zenguqu.
I-Scorpio inqwenela ukuba uhlobo lokutshintshela ngokupheleleyo, kwaye ludityaniswa ngokuthe ngqo kwabo bangakwazi ukuhamba emthunzini nabo. Ulwalamano kunye neSorpio lungahle lube lula, kodwa luguqula ubomi, njengoko luhlala lufikelela emphefumlweni. Ayikho enye yezinto zokungcebelekanga, i-Scorpio izisa yena ngokwakhe, kwaye ikhangele abanye abakwazi ukwenza okufanayo.
Ngaphezulu malunga nendlela uScorpio ayithanda ngayo, jonga iVenus neMars. Ukufumana okungakumbi kwiimeko ezinzulu zengqondo, jonga uphawu lweNyanga .
Musa ukuxoka ngamanga, ukuze ufumaneke.
Musa ukubuza imibuzo emininzi ekuqaleni.
Unganikeli amandla akho, njengoko yindlela eqinisekileyo yokulahlekelwa intlonipho.
Hlola iinjongo zakho zokuhlangana. Ukuba zibandakanya ukusebenzisa i-Scorpio nganoma iyiphi indlela, bhetele ucinge kabini.
Ungazami ukwenza umphathi we-Scorpio ngeenxa zonke.
Musa ukunyaniseka ukuba uSorpio uyakwazi ukwenza indlela yawo.
Ungazami ukukhuphisana neScorpio.
Musa ukuzithemba okanye ukuzithengela.
Musa ukucinga ukuba ungumbhangqwana ngokukhawuleza.
Musa ukuxelela abahlobo iinkcukacha ezitshatileyo zobudlelwane bakho.
Musa ukuthumela izinto ezizimeleyo ngeScorpio kwi-Facebook.
Ungazifaki, mhlawumbi, ngaphandle kokuba ufumane imvume.
Yintoni enokuyenza (ukunyusa iScorpio )
Khetha iindawo zokutya okanye ukuhlangabezana nazo ezibonakala ngathi ziyimfihlo.
Yabelana ngamabali anesimo sengqondo.
Thetha ngezifiso zakho.
Phakamisa ukuza kubona ama-movie ngeemfihlelo eziyinkimbinkimbi kwisiqendu.
Yiba nokholo kuwe.
Inkxaso yeScorpio, kodwa ungabonakali okanye ubonise uvelwano.
Nika izipho ezicingileyo ngokusekelwe kwinto okhumbulayo ukuva iScorpio ithi.
Cwangcisa ufike-apho apho kungekho mntu uyazi apho ukhona.
Ukuhlakulela ingqiqo yolwalamano lwangasese.
NdiyiVirgo kuLuthando kunye neAries
Imfazwe Yehlabathi II: iHMS Hood
Ngaphandle kwe-Clinical Psychology PhD: Ezinye iindlela zokuSebenza kwiNyango
"I-Chanticleer" I-Callery Pear Tree
Iimpawu ezi-10 eziLungileyo eziLungileyo zama-50s